I-Oxymetholone (Anadrol) ipowder (434-07-1) hplc =98% | I-powder powder
I-Oxymetholone (Anadrol) ipowder
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Oxymetholone (Anadrol) powder
SKU: 434-07-1. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Oxymetholone (Anadrol) powder kufumaneka ukusetyenziswa kwazo ngokuqhelekileyo phakathi kwabadlali kunye nabakhi bomzimba ngenxa yeziphumo ezininzi ezibonelela ukuba zivuselele i-testosterone supplements. Ukugcina ubunzima, i-Anadrol powder yayicingelwa njengesixhobo sokufumana izilwanyana. Ukongezelela ukwandisa ukutya, kwakunceda ekufumaneni amandla kunye nokubalwa kweeseli zegazi.
I-Oxymetholone (Anadrol) ividiyo ye powder
I-Oxymetholone (i-Anadrol) engumdaka Abalinganiswa basisiseko
igama: Oxymetholone (Anadrol) powder
Isisindo somzimba: 332.48
I-Oxymetholone (i-Anadrol) ebomvu i-Raw usetyenziso lwepowder kumjikelezo we-steroids
I-Oxymetholone powder nayo ibizwa ngokuba yi-Anadrol powder, A-bomb kunye ne-A50.
Ukusetyenziswa kwe-Oxymetholone powder
Ukongeza i-Anadrol powder kwi-50 mg / imini ka-Dianabol inikeza inzuzo encinci kwinqanaba le-steroid; Ngokwahlukileyo, ukongeza i-Anadrol powder kwi-50-100 mg / ngosuku i-trenbolone acetate okanye i-60-80 mg / usuku uAnavar (i-oxandrolone) inika uphuculo olunzulu.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo ngu-50-150 mg / ngosuku. Kwezinye iziganeko ezininzi ezifana ne-300 mg / imini zisetyenzisiweyo, kodwa xa zigcinwe ngokufanelekileyo kunye nenye enye i-anabolic steroids, ngokuqhelekileyo akukho nzuzo ngakumbi ngaphandle kwe-150 mg / ngosuku.
Isixwayiso kwi powder Oxymetholone powder
Imiphumo ye-Anadrol powder iya kuhamba ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa. Kutheni uzikhathaze ngale myeza ukuba iziphumo ziya kuhamba ngokukhawuleza? Kaloku, Anadrol lomgubo kwamnandi njenge inkxaso yethutyana siyiphucule kakhulu ukukwazi kwakho ngexa usalinde ezinye iikhompawundi isixhasi ukukhaba kulo. Uthenga ixesha kwaye ikuvumela ukuba uqale umsebenzi wakho ngaphandle kwi 100%, endaweni yeeveki imali okanye iinyanga kancinci kungena kuwo.
Imiphumo ye-Anadrol powder ingahluka ukusuka kumntu kumntu, kodwa ngokuqhelekileyo ilandele le ndlela. Uza kubona iingeniso ezintle ezinokuqala kwiiveki ze-3 zokuqala zokusebenzisa ukongeza. Imiphumo iya kubalwa ngokubanzi emva koko. Ukunciphisa iimeko ezinobungozi, cingisisa ngokulinganisa umlinganiselo wakho.
I-Raw Anadrol powder
I-Raw Oxymetholone yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Oxymetholone powder; athenge i-Anadrol powder evela kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 98% Oxandrolone / Anavar powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilebhu zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.
Raw Anadrol powder Recipes: